Lojy mitsangana: harena manokan’ny faritra Boeny | Région Boeny
« Antsika jiaby miasa hampiakatra ny fari-piainan’ny tantsaha, hampandroso ny toe-karen’ny faritra ». Io no lohahevitra entina hanamarihana ny « Foara Lojy Mitsangana sy ny voa-maina » andiany faharoa hatao ny 28, hatramin’ny 30 jolay ao Ambodromamy, distrikan’Ambatoboeny.
Ny zoma 22 jolay 2017 dia nanazava tamin’ireo mpanao gazety eto Mahajanga ny mpikarara ny foara, dia ny avy amin’ny Faritra Boeny, ny Tranoben’ny Varotra sy ny Indostria, Foibem-paritry ny Fambolena sy ny Fiompina, ary ny fandaharan’asa Prosperer.
Tanjona ny hampahafantarana fa “vokatra iray mampiavaka sady harena manokan’ny faritra Boeny ny Lojy mitsangana satria isika no mpamokatra voalohany azy io eto Madagasikara” hoy ny Lehiben’ny faritra, Atoa Saïd Ahamad Jaffar.
Miezaka hatrany eo amin’ny fanatsarana sy fampiroborobona ity voamaina ity araka izany ny faritra sy ireo tantsoroka sy mpisehatra rehetra amin’izy io mba hanatsarana ny faripiainan’ny tantsaha, sy hampandroso ny toe-karen’ny faritra, araka ny ny faritan’ny loha-hevitra.
Ho fanatanterahana izany, dia hapetraka ny tsy maintsy hahitana soritra (Traçabilité) ny lalam-pihariana Lojy mitsangana indrindra ho an’ireo vokatra haondrana any ivelany. Nomarihin’ny lehiben’ny faritra fa tsapa fa miaka-danja ka mitondra fanatsarana eo amin’ny fiainan’ny tantsaha io vokatra io ankehitriny eto Boeny.
Natao araka izany ny foara Lojy Mitsangana sy ny voamaina andiany faharoa mba hisian’ny sehatra iray ahafahan’ny mpivarotra sy ny mpividy ary ireo mpikirarika ny vokatra mifampiserasera misimisy kokoa ary hiantsoana ireo izay te-hisehatra amin’izany làlam-pihariana izany koa.
Ahafahana ihany koa mampahafantatra fa manana fihariana Lojy mitsangana manaraka ny fenitra takian’ny lalàna amin’ireo vokatra haondrana isika eto Boeny.
Tany Ambatoboeny ny taona lasa ny andiany voalohany, ary ny tatitra avy tamin’ireo mpandray anjara no nahafantarana fa nahazo tombony avokoa izy ireo. Ny lojy no atao laharam-pahamehana amin’ity andiany faharoa ity fa ho hita ao avokoa ireo vokatra samy hafa mampalaza ny faritra sy ny distrikan’Ambatoboeny ary ny kaominin’ Ambondromamy.